Izilwanyana ezininzi ze- eukaryotic zinokuba neentlobo ezahlukeneyo zeeseli ezingenza imisebenzi eyahlukeneyo njengoko zidibanisa ukwakha izicubu, kodwa zimbini iintlobo zeeseli ngaphakathi kwimizimba emininzi: iiseli ze-somatic kunye neigetet, okanye iiseli zesini.
Iiseli zeSomatic zenza uninzi lweeseli zomzimba kunye neakhawunti yoluphi na uhlobo oluqhelekileyo lweseli emzimbeni ongawenzi umsebenzi kwisinikelo sokuzala ngokwesondo kunye nabantu, ezi iiseli ziqukethe iisethi ezipheleleyo ze-chromosomes (ezenza iiseli ze-diploid) .
Ngakolunye uhlangothi, zibandakanyeka ngqo kumjikelezo wokuzala kwaye zihlala zikhona i-haploid, nto leyo ithetha ukuba i-chromosomes enye inegalelo elivumela ukuba nganye iseli echaphazelayo idlulise isahluko sesethi epheleleyo efunekayo ye-chromosomes yokuvelisa.
Ziziphi iiseli zeSomatic?
Iiseli zeSomatic zihlobo oluqhelekileyo lweeseli zomzimba ezingabandakanyekanga nakweyiphi na indlela ekuveliseni ngesondo, kwaye kubantu benziwa i-diploid kwaye bavelisa ngokusebenzisa inkqubo ye- mitosis ukwenza iikopi ze-diploid ezifanayo xa zihlukana.
Ezinye iintlobo zeentlobo zinokuba neeseli ze-haploid somatic, kwaye kulezi zintlu zabantu, zonke iiseli zomzimba zazo zinomlinganiselo omnye wama-chromosomes. Oku kufumaneka kuyo nayiphi na uhlobo lweentlobo ezinobomi obunobomi okanye ulandelelanise ukutshintshwa kwemijikelezo yobomi bemizukulwana.
Abantu baqala njengeyunithi enye xa i-sperm kunye neqanda lixhamla ngexesha lokuchumisa ukwenza i-zygote. Ukusuka apho, i-zygote iya kufakwa kwi-mitosis ukuze idale iiseli ezifanayo, kwaye ekugqibeleni, la maseli e-stem aya kukwahlukana ukuze enze iintlobo ezahlukeneyo zeeseli-somatic-kuxhomekeke kwixesha lokuhlukana kunye nokukhanya kweeseli kwiindawo ezahlukahlukeneyo njengoko zikhula, iiseli ziqala phantsi iindlela ezahlukeneyo zokuphila ukuze zenze zonke iiseli ezisebenzayo ngokwasemzimbeni womntu.
Abantu banamaqela angaphezu kwama-trillion njengomntu omdala aneeseli ze-somatic ezenza ubuninzi baloo nani. Iiseli ze-somatic ezahlukileyo zingaba neurons ezindala kwinkqubo yeentlanzi, iiseli zegazi kwi-cardiovascular system, iintsholongwane zesibindi kwinkqubo yokutya, okanye ezininzi, ezinye iindidi kuwo wonke umzimba.
Phantse zonke izilwanyana ze-eukaryotic ezininzi ze-eukaryotic ezenza ukuveliswa ngokwesondo zisebenzisa iigetet, okanye iiseli zesini, ukudala inzala. Ekubeni abazali ababini bayimfuneko ukudala abantu kwisizukulwana esilandelayo sezilwanyana, i-gametes ngokuqhelekileyo iiseli ze-haploid. Ngaloo ndlela, ngamnye umzali unokunikela isiqingatha se-DNA ngokupheleleyo kwi-seed. Xa ezimbini i-haploid i-gametes fuse ngexesha lokuzaliswa kocwangco lwezondo, ngamnye unika igalelo elilodwa lama-chromosomes ukwenza i-zygote enye ye-dipyidide eneesethi ezimbini ze-chromosomes.
Kubantu, iigetet zibizwa ngokuba yi-sperm (kwindoda) kunye neqanda (kwintombi). Ezi zenziwe yinkqubo ye-meiosis, engathatha iseli ye-diploid kwaye yenza ezine i-haploid gametes ekupheleni kwe-meiosis II. Nangona umntu wesilisa angakwazi ukuqhubeka nokwenza i-gametes emitsha ebomini bakhe ukususela ebusheni, umntu wesifazane unenani elincinci lamagetet angayenza kwisithuba esifutshane.
Ngamanye amaxesha, ngexesha lokuphindaphinda, iimpazamo zenziwa, kwaye ezo zinguqu zitshintsha i-DNA kwiiseli zomzimba. Nangona kunjalo, ukuba kukho utshintsho kwisisele se somatic, cishe akunakufaka isandla kwizinto eziphilayo.
Ekubeni iiseli ze-somatic azibandakanyekanga kwinkqubo yokuvelisa ngesondo, nayiphi na utshintsho kwi-DNA yeeseli ze-somatic aziyi kudlulela kwinzala yomzali oguqukileyo. Ekubeni inzala ayinakufumana i-DNA etshintshileyo kunye naluphi na uhlobo oluthile umzali angenayo luya kudlula, utshintsho kwi-DNA yeeseli ze-somatic aluyi kubangela ukuziphendukela kwemvelo.
Ukuba kwenzeka ukuba kukho utshintsho kwi-gamete, leyo ingakhokelela ukuziphendukela kwemvelo. Iingcamango zenzeke ngexesha le-meiosis ezinokutshintsha i-DNA kwiiseli ze-haploid okanye ukudala utshintsho lwe-chromosome olungabongeza okanye ukucima i-DNA kwii-chromosomes ezahlukeneyo. Ukuba enye inzala iyadalwa kwi-gamete enokuguqulwa kwayo, ke loo ntwana iya kuba neempawu ezahlukileyo ezinokuthi zingenakulungele ukusingqongileyo.
Yintoni iAnaphase kwi-Biology Cell?
Iincwadi zeMatriki kunye neLatinino zeGreat Heritage zezingane kunye nentsha
Imbali kunye nenjongo ye-Shawnee Pottery Jars
Ukubonga Ukungahloneli Thixo: Ngaba Ngaba Abantu Abakholelwa KuThixo Banokubonga?
Iziphakamiso ezichasiweyo zeMveliso eyiNtloko
15 Iincwadi zokukunceda Ukwakha ikhaya elincinci oyifunayo
Iifommshini zikaStanley Kubrick